China Sodium methoxide suppliers na china CAS 124-41-4 ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | Guanlang
Ndị na-ahụ maka ọgwụ
Disinfectants na antiseptik
Ngwa ngwa anụmanụ
Ndị na-emepụta sodium methoxide na china CAS 124-41-4
Ndị na-emepụta Ortho phenylphenol na china (OPP) O-Ph ...
Ndị na-eweta Procaine na china nwere cas 59-46-1
Zinc Pyrithione Detergent Raw Materials Nlekọta ntutu Ch...
Onye na-eweta phenacetin dị na china free sample dị
Ụlọ ọrụ China na-enye Methylamine kachasị dị ọcha ...
Aha ngwaahịa sodium methoxide
Usoro ule HPLC
Ibu molekụla 54.02
Usoro ihe omimi CH3NaO
Onye nrụpụta: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd.
Ọkwa ngwaahịa: Dị na ngwaahịa
Nnyefe: N'ime ụbọchị ọrụ 3
Ụzọ mbupu: Express, oké osimiri, ikuku, pụrụ iche ahịrị
Anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga Ndị na-emepụta sodium methoxide na China,ọ bụrụ na ị chọrọ zụta sodium methoxide, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ọnụahịa asọmpi na ihe nlele efu.
Ụdị okwu:sodium methoxide,sodium methylate,sodium methoxide ntụ ntụ,sodium methylate ntụ ntụ, siri ike sodium methylate, siri ike sodium methoxide,124-41-4,CH3NaO
Ọdịnaya (mkpokọta alkali) 99.2-99.4%
Odium carbonate (Na2CO3) ≤0.5%
Mmiri (H2O) ≤0.65%
Gịnị bụ Sodium Methanolate?
Sodium methoxide bụ corrosive na spontaneous combustion.It bụ tumadi ji na-emepụta ọgwụ ụlọ ọrụ, na ọ na-eji dị ka catalyst maka mbenata ngwakọta, chemical reagent na oriri mmanụ na organic synthesis.Methanol sodium nwere a dịgasị iche iche nke ngwa, tumadi ji na mmepụta nke. sulfonamide na sodium methanol dị ka ihe na-akpali akpali maka mmepụta pesticide na ụlọ ọrụ nhazi mmanụ.
Methanol sodium nwere ọtụtụ USES, nke a na-ejikarị na mmepụta nke sulfonamides, na sodium methanol bụkwa ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe ọkụkụ na-emepụta pesticide na ụlọ ọrụ nhazi mmanụ.
E nwere ụdị abụọ nke sodium methanol ngwaahịa na ụlọ ọrụ: siri ike na mmiri mmiri, siri ike bụ sodium methanol, mmiri mmiri bụ methanol ngwọta nke methanol sodium, na sodium methanol bụ 27.5 ~ 31%.
A na-eji ya dị ka ngwakọta na-akụda alkaline na ihe na-akpali akpali na njikọ organic, nke a na-eji maka njikọ nke ngwa nri na ihe e ji esiji ákwà, na bụ ihe onwunwe nke vitamin B1, A na sulfadiazine.
Dị ka akụrụngwa maka ọgwụ na pesticide, ọ bụ ihe dị mkpa akụrụngwa maka njikọ nke ọgwụ dị ka sulfathimine, new normin na sulfonamide.
A na-ejikwa ya dị ka ihe na-akpali akpali maka ọgwụgwọ abụba na mmanụ, karịsịa na ọgwụgwọ mmanu abuba, iji gbanwee usoro abụba ma mee ka ọ dị mma maka bọta artificial, nke a ghaghị iwepụ na nri ikpeazụ. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka A. reagent, A siri ike alkaline catalyst na A methoxylation, nke a pụrụ iji maka mmepụta nke vitamin B1 na A, sulfadiazine, na A obere ego maka pesticide mmepụta.
A na-ejikwa ya dị ka reagent nyocha nke a na-ejikarị eme ihe na ngwa nri, akwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ anyị:
Ihe ngosi anyị:
Nke gara aga: Ndị na-emepụta monoethanolamine na china Cas 141-43-5
Osote: Ndị na-emepụta Glutaraldehyde 50% na china CAS 111-30-8
Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. bụ nke Guanlang Group, nke tọrọ ntọala na 2007, emi odude ke Shijiazhuang obodo nke bụ isi obodo nke Hebei Province na hub ngalaba n'etiti Beijing Tianjin na Hebei na nwere uru nke adaba njem . Ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ kemịkalụ dị elu nke ọgbara ọhụrụ na nyocha & mmepe, mmepụta na ire ere.
zụta sodium methoxide
ndị na-emepụta sodium methoxide
Ndị na-emepụta sodium methoxide na China
sodium methoxide ntụ ntụ
sodium methylate ntụ ntụ
sodium methoxide siri ike
sodium methylate siri ike
China Diltiazem soplaya emeputa Dilt ...
China Amphotericin B Suppliers na Cas 13 ...
PROCAINE / PROCAINE BASE CAS 59-46-1 n'efu ...
Tianeptine Sodium emeputa soplaya na ...
Ndị na-eweta Melatonin na China ...
China High Quality Mbelata ibu ntụ ntụ 99% ...
Otu Guanlang© nwebiisinka - 2010-2022: Ikike niile echekwabara.
Ọnụ ego phosphorus na-acha odo odo mụbara nke ukwuu
Mbadamba ụrọ Clo2 500kg n'efu na FELI...